कैलाली र कञ्चनपुरमा लम्बाइयो निषेधाज्ञा, आदेशमा के छ ? – Sodhpatra
कैलाली र कञ्चनपुरमा लम्बाइयो निषेधाज्ञा, आदेशमा के छ ?
प्रकाशित : १० भाद्र २०७८, बिहीबार २०:०० August 26, 2021
धनगढीः कञ्चनपुरमा जारी निषेधाज्ञा भदौ २० गते सम्मका लागि पुनः थपिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञालाई थप गरेको जनाएको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले आजसम्म जारी निषेधाज्ञालाई लम्ब्याई २० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक यातायातका सबै सवारी साधन बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइनेछ । भने अत्यावश्यक सवारी साधन, सरकारी, निजी तथा मालवाहक लगायतका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छ । अत्यावश्यकीय बाहेकका सबै खाले पसलहरू प्रत्येक दिन बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कैलालीमा जारी निषेधाज्ञा अर्को आदेश नभए सम्मका लागि निरन्तरता दिईएको छ । जिल्लामा कोरोना संक्रमणदर कायमै रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अर्को आदेश नआएसम्मका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको हो ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्दैगईरहेको परिपेक्ष्यमा जीवनयापनलाई समेत क्रमश सहज गर्दै जाने र कोभिड-१९ को संक्रमण समेतलाई नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षाका लागि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जिल्लाभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिईएको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यस अघि जारी गरेको निषेधाज्ञा आज राती १२ बजे सकिदै छ ।